Indawo yangoku e-Eslarn eneLake elikufuphi
UKim - BELVILLA unezimvo eziyi-3817 zezinye iindawo.
Le ndlu yanamhlanje ise-Eslarn, kumazantsi eJamani. Kukho amagumbi ama-2 apho abantu aba-4 banokulala khona. Yindawo efanelekileyo yokuhlala kwiholide yosapho. Indlu ibekwe kwindawo esembindini, nayo yonke into oyifunayo kumgama wokuhamba.
Kufuphi ungahamba ngebhayisekile, enkosi kuthungelwano olulungileyo kunye neendlela zeenyawo, kwaye uthathe uhambo lokuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile. Kodwa unokuthatha uhambo oluya e-Stückberg kwi-808 m kunye ne-loookout tower, i-Eulenberg kwi-817 m okanye i-Stangenberg kwi-750 m. Ungandwendwela indawo yokugcina izilwanyana eStückberg. Ngenxa yokuba uhlala kufutshane nomda weCzech, usuku lwePilsen nePrague lunokwenzeka.
Indlu iphangalele kwaye inefenitshala ixhotyiswe ngokupheleleyo. Ikhitshi libandakanya i-toaster kunye ne-dishwasher kunye negumbi lokuhlambela lineshawari. Kukho igadi enkulu enefenitshala yegadi owabelana ngayo nezinye iindwendwe.
Uyilo: Kumgangatho woku-1: (ikhitshi elivuliweyo(itoasta, i-cooker(izitovu zeringi ezi-4, i-ceramic), umatshini wekofu(isihluzi), i-oveni, i-microwave, i-dishwasher, ifriji-ifriji), Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela(iTV), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini (180 x 200 cm)), igumbi lokulala(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese), Ukuhlala)
igrill, i-tumble dryer, umatshini wokuhlamba, ukufudumeza(ombindi, ukufudumeza umgangatho), igadi(kwabelwane ngayo nezinye iindwendwe, ibiyelwe), ifenitshala yegadi, indawo yokupaka
Izimvo eziyi-3 820